अफ्रीका - दोस्रो ठूलो महाद्वीप र, संभवतः, मानिसजातिको पैतृक घर। unbridled प्रकृति र सभ्यता, दक्षिण अफ्रिका गगनचुम्बी भवनहरू र सयौं संयोजन जंगली कुल स्वाजील्याण्ड को। यो महादेशमा एकै समयमा यसको सादगी र रहस्य आकर्षित गर्न विफल हुन सक्दैन। अफ्रीका को ठाँउहरु हेर्न हरेक वर्ष उत्सुक पर्यटक भीडलाई।
अफ्रीका लगभग एक अर्ब मानिसहरूलाई घर हो र यसको इलाकामा 55 राज्य विभाजन गरिएको छ। सुदूर विदेशी अतिथि खोल्न तयार महाद्वीप को सबै कुनामा देखि। तर, हालका वर्षमा को पर्यटन संभावित अफ्रिकी देशहरूमा झन् विकसित गर्दै छन् र पहिले अफ्रीका को ठाँउहरु लुकेको प्रकट गर्छ। तातो घाम र समुद्री तट, thrill खोज्नेहरूको को प्रशंसक - सबैलाई यहाँ आफूलाई लागि केहि पाउन सक्नुहुन्छ।
सबै भन्दा साधारण साइटहरु पर्यटकहरु द्वारा अफ्रिकी महादेशमा स्वामित्वको, द्वीप भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ। मडागास्कर को आश्चर्यजनक धनी प्रकृति, Mauritius जंगल क्यानरी तटों र सेचिलिस को अविश्वसनीय सौन्दर्य स्वर्ग को आफ्नो टुक्रा फेला पार्न चाहने ती लागि आफ्नो स्पेस खोल्नुहोस्।
कन्टिनेन्टल अफ्रीका पनि केही ट्रम्प कार्ड अप सुरक्षित गरियो। मोरक्को र टुनिशिया लगभग कुनै टापुहरूमा गर्न कमसल छ। बलौटे समुद्री तट साथै, यी देशहरूमा आफ्नो मध्ययुगीन अरब सहर लागि जानिन्छ। र मोरक्को त्यहाँ पनि नीलो शहर हो। अफ्रीका आकर्षण Enumerating, तपाईं मिश्रको पिरामिड र प्राचीन कार्थेज सम्झना गर्न सक्दैन।
प्राकृतिक स्रोतहरू प्रेम सामान्यतया तान्जानिया, केन्या र रवान्डा मा राष्ट्रिय पार्क को एक भ्रमण गर्ने मौका सम्झना छैन। केही पनि नामिबिया, अल्जेरिया को अफ्रीकी मरुभूमि भ्रमण जानुहोस्। एघार अफ्रिकी देशहरूमा भित्र छ जो सहारा, - यहाँ संसारमा सबै भन्दा ठूलो मरुभूमि छ।
अफ्रीका अक्सर जीवन र मानवता को पालने को पालने भनिन्छ, र यो यसको प्रकृति को विविधता कारण छैन। वैज्ञानिकहरूले लामो यो अवधि संग सहमत भए, र पनि, यसको वृद्धि गर्न योगदान यो अफ्रिकी को खुला रिक्त छ किनभने प्राचीन मानव रहलपहल खोज। धेरै अनुसन्धानकर्ताहरूले अफ्रिकी महादेशमा संसारभरि हाम्रा पुर्खाहरूले थप बन्दोबस्त गर्न थालेका छ भन्ने विश्वास गर्छन्।
अब मानवता बारेमा 470 वर्ग मीटर आकार जोहानसबर्ग देखि 50 किलोमिटर भूमि प्लट को पालने रूपमा उल्लेख। यहाँ जहाँ प्राचीन मान्छे को हड्डी फेला परेन 30 भन्दा बढी पुरातात्विक साइटहरू, स्थित छ। पालने को यूनेस्को विश्व सम्पदा साइट को भाग हो। मूलतः रहिरहन्छ को गुफाहरु फेला पर्यो। मानव रहलपहल साथ फेला र विभिन्न स्तनधारी को हड्डी थिए।
मन्दिर आइभोरी कोस्ट
कोट डी'आइवर, वा को आइभोरी कोस्ट, एक फ्रान्सेली बस्ती एक पटक रूपमा, एक उत्तराधिकार धेरै cathedrals पाउनु भएको छ। को क्याथोलिक गिरजाघर शान्ति हाम्रो लेडी - शान्ति को लेडी हाम्रो Basilica - सबै भन्दा प्रसिद्ध छ। यो Yamuskura मा राज्य राजधानी मा स्थित छ र रेकर्ड पुस्तकहरु मा संसारमा सबै भन्दा ठूलो गिर्जाघर रूपमा सूचीकृत गरिएको छ। को प्रोटोटाइप यो भेटिकन मा सेन्ट पीटर को गिरजाघर भयो। को गिर्जाघर को घरको छानो 158 मिटरसम्मको rises, तर गिर्जाघर नै धेरै फराकिलो र भेटिकन धेरै सानो छैन।
शान्ति को लेडी हाम्रो गिरजाघर - अर्को समर्थक-युरोपेली गिर्जाघर र अफ्रिकी संस्कृति गर्न पूर्ण असम्बन्धित छ। थप अद्वितीय र रंगीन मस्जिद यहाँ। शहर Kauara सुडानी प्रकार मस्जिद, XVII शताब्दीमा निर्मित छ। स्थानीय जलवायु गर्न मन्दिरमा अनुकूल कि वास्तु विवरण रोचक मस्जिदों को सुडानी विशेष प्रकार। एडोब जस्तै मस्जिद माली मा अझै पनि रह्यो। हांगकांग को शहर मा मस्जिद पनि राष्ट्रिय धन मानिन्छ, फिर्ता XVII सताब्दी गर्न तिथिहरु।
क्राउन तान्जानिया - किलिमन्जारो
अफ्रीका यसको उच्चतम पहाड लागि विशेष प्रसिद्ध छ। को तान्जानिया फाँटमा बीचमा यो "चमक पहाड" 5890 मीटर सम्म rises। तपाईं आफैलाई लागि हाम्रो ग्रह को जलवायु को सबै प्रकार को अनुभव गर्न सक्छन् पहाडी माथि जाँदै। पर्वतमा को तल सिंह र तेंदुआ गर्न बाँदर थुप्रै रोचक बासिन्दाहरू संग Savannah फैलिएको। तल चुचुराहरूको पग्लिने, हिउँ ढाकिएको पहाड प्रवाहको तल प्रवाह।
त्यहाँ व्यवसायीक र किलिमन्जारो जित्न निर्णय गर्ने अवैतनिक पर्यटकहरुका लागि डिजाइन गर्दै छन् धेरै मार्गहरू छन्। यी ठाउँमा अफ्रीका यसको साँचो प्रकृति र चरित्र प्रकट गर्छ। Tarangire र Serengeti: पहाड नजिकै दुई राष्ट्रिय पार्क हो। उत्तरार्द्ध पनि संसारको सबैभन्दा ठूलो रिजर्व को छ।
यसलाई छोटकरीमा अफ्रीका को सबै ठाँउहरु सूची असम्भव छ। यो महादेशमा रोचक प्राकृतिक र वास्तुकला साइटहरु को एक विशाल संख्या छ। वन्यजन्तु, पहिचान, धेरै savannas, मरुभूमिमा प्रस्तुत। विशाल मा, राष्ट्रिय पार्क र रिजर्व आगन्तुकहरूलाई लागि खोल्न अद्वितीय जनावर। यसलाई यहाँ मात्र तपाईं केहि वास्तविक र unfeigned महसुस गर्न सक्ने देखिन्छ।
ग्रीस मा पर्यटन
भूमि परिवहन तालिका: कति मास्को मा बसें सम्म
अद्वितीय साइप्रस: पानी पार्क "जल दुनिया"
आभूषण - यो के हो? अर्थ
Autism र रोग को विशेष गरी उपचार के हो
गुलाबी सामन भुना। लागि नुस्खा
डिजोन तोरी। पकाउने गर्न गोप्य
घर ककडी लोशन मा खाना पकाउन कसरी? विभिन्न प्रकार को छाला को लागि विकल्प
तुर्कमेन होटल3- टर्की को सबै भन्दा क्षेत्रमा एक रहन